နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်မြောက်ရေး ~ SAI SENG SERK
Home » NOTE BOOK » နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်မြောက်ရေး
(သြစတြေးလျ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေး အကျိုးဆောင်တစ်ယောက်၏ အကြံပြုချက်များ )
နိုင်ငံရေးသမား(နိုင်ငံရေးအကျိုးဆောင်) ကောင်းဖြစ်မြေက်ရေးပညတ် ၁၀ပါးကို သြစတြေးလျပါလီမန်ရဲ့ အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်း ဗစ်ကီ ဗောင်း (Vicki Worrall Bourne ) ကရေးသားပြီး အင်တာနက်မှာ တင်ထားပါတယ်။
မစ္စဗောင်းဟာ နယူဆောက်သ်ဝေးမဲဆန္ဒနယ်ကနေ အထက်လွတ် တော်အမက်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရပြီး ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၀၂အထိ ဆီနေတာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဗစ်ကီဗောင်း (၁၉၅၄ဖွား) ရဲ့နိုင်ငံရေး ဖြတ်သန်းမှုကိုကြည့်ရင် သူတို့ဆီက နိုင်ငံရေးဘ၀ကြောင်း အကြမ်းဖျင်းသိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမက ဆစ်ဒနီမြို့မှာမွေးတယ်။ တက္ကသိုလ်က BSC ၊ MSC ဘွဲ့များရတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၁၉၈၇ မှာဒီမိုကရက် ဆီနေတာ ကော်လင်း မေဆင် ဆီမှာသုတေသန မှူးအဖြစ် အမှုထမ်းတယ်။၁၉၈၀ မှာ ဒီမိုကရက်ပါတီကို ၀င်တယ်။ ၁၉၈၀ မှာဒီမိုကရက်ပါတီကိုဝင်တယ်။ သူမရဲ့ လက်ဦးဆရာ မေဆင်ရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါ ဗစ်ကီဗောင်းဟာ ဆီနေတာ ပေါလ် မက္ကလင်းဆီမှာ သုတေသနမှူးဆက်လုပ်ခဲ့တယ် ။၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကျတော့ သူမဟာ ဆီနိတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး အရွေးခံရတယ်။ ဇူလိုင် ၁၉၉၀ ကစပြီး ဆီနေတာဖြစ်ခဲ့ရာက ၁၉၉၆ မှာ ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ခံရတယ်။၂၀၀၁ ကျတော့အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သြစတြေးလျ ဂရင်းပါတီကအမတ်လောင်း ကယ်ရီကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီမှာက နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာရှံးတစ်ခါ နိုင်တစ်လှည့်ပါ ဒီလိုပဲသွားနေကြတာပဲဆိုတော့ ဗစ်ကီဗောင်းဟာသူမရဲ့ အလှည့်ကိုဆောင့်နေတုန်းပါပဲ။
ဗစ်ကီဗောင်းက နိုင်ငံရေးလုပ်မည့်သူတွေကိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက် ၁၀ ချက်သညာပေးပြီး အင်တာနက်မှာတင်ထားပါတယ် ။
၁။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပါ ။
နေရာယူတက်တိုင်းအာဏာရသည်မဟုတ် ။ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ သင့်မှာမဖြစ်စလောက် အာဏာလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ထားပါ။ အာဏာဆိုတာ စုပေါင်းလုပ်ရပ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။
၂ ။အခြားလူတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပါ ။
ပြည်သူတွေနှင့် မကင်းမကွာနေပါ။ နောင်အခါသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကို သင်လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ် ။
အခြားလူတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုငါဘယ်လို ရနိုင်မလဲ။
လူတိုင်းလူတိုင်းအနေနဲ့ တစ်ခုကတော့အကျိုးအမြတ်ရရှိသွားတဲ့ အနေအထားကိုဖန်တီးပါ။
၄။ အထူးသတိပြုပါ ။
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ် တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကို သေသေချာချာ သုတေသနပြုပါ။ သင်လေ့လာထားတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ပက်သက်လို့ ပါလီမန်ထဲမှာ သင်ဟာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။
နောက်ဆုံးတော့အခြားသူများက အများရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်၊တစ်ဦးချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်အမြင်ကိုမေးမြန်းလာရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာမယ်။ဒါဟာသင့်အနေနဲ့အတော်ကြီးမားတဲ့ နေရာရယူမှုနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တယ်။
၅။ရှင်းလင်းသဲကွဲပြီးလက်တွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပန်းတိုင်များ ရှိပါစေ ။
အတိုင်းအဆရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်များကိုရွေးချယ်ပါ။( သင့်စိတ်ဓတ်နဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်ပါစေ။)
သုတေသနပြုပါ။ဒေသန္တရပြသနာကနေ နိုင်ငံတကာပြဿနာအထိ ဘယ်ကိစ္စရပ်ကိုဆွေးနွေးသည်ဖြစ်စေ ၊ သင့်မှာနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်ရှိနေအောင်လေ့လာထားပါ။
အခြားလူများရဲ့အတွေ့အကြုံဟာ သင့်အကြုံနဲ့မတူကွဲပြားနိုင်တယ်။ သူများရဲ့အတွေ့အကြုံက သင့်အမြင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟင့်အင်းလို့ ပြောရတာ၊ငြင်းဆန်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ သင် ငြင်းဆန်လိုက်သူရဲ့အကူအညီကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာ သင်လိုကောင်းလိုလာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သင်ငြင်းဆန်တဲ့အခါ တစ်ဖက်သားကိုစော်ကားလိုက် သလိုမဖြစ်စေနဲ့။
ပါလီမန်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ အစဉ်အလာတွေကိုပို၍နားလည်လေ၊ အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးချပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပို၍နားလည်လေ၊ အဲဒါတွေ အသုံးချပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်များကို ပို၍ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလေ။
Ref: Ten Rules For BeingaGood Politician (and Member of Parliament), Vicki Bourne.
နိုင်ငံရေးသမား၊နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစကားလုံးနှစ်မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြနိုင်ပါတယ် ။ Statesman နဲ့ Politician ဆိုပြီးခွဲခြားပါတယ် ။အဘိဓာန်အဓိပ္ပယ်က Statesman ဆိုတာ နိုင်ငံပြု သုခမိန် ၊ အမြော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ နိုင်ရေးသမားများ ။ Politician ကတော့နိုင်ငံရေးသမားပါပဲ။ သည်တော့ကာ Statesman တွေလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ပါတီ အာဏာရရေးထက် ကိုယ့် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကို အဓိကထားခြင်းသည် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပဲလို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုတွေ့ဖူးတာက Politician ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြည့်တယ်တဲ့။ Statesman က နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုအတွက်ပါကြည့်တယ်တဲ့ ။တော်တော် အဓိပ္ပယ် ‘တာ’ သွားတဲ့ဖွင့် ဆိုချက်ပါပဲ။ Statesman အဆင့် ရောက်သွားရင် ကိုယ့်ပါတီအာဏာရရေးကို ရှေ့ တန်းမတင်တော့ဘူး။ တစ်မျိုးသားလုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ထွန်းဖို့ကိုပဲကြံစည်လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။
နောက်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခု ဖက်ဖူးသေးတယ်။နေရူး ဟာ Statesman ဖြစ်တယ်။ အင်ဒီရာဂန္ဒီကတော့ Politician တဲ့. . .
ဆောင်းပါးရှင်ဆရာဝံသ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. .ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများ နဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ကိုဆောင်ရွက်မယ့် Statesman တွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Get From >>> မောင်ဝံသ